Amazonie extrême : Afo sy Tondradrano Misy Fiantraikany Amin’ny Fahasalaman’ny Daholobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2016 6:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Nederlands, Português
Tavy natao mba hahafahana mamboly sozà any amin'ny faritra manakaiky an'i Flona Tapajós. Mitatra any anatin'ireo farira arovan'ny ICMBio ireo tavy tsy voafehy. Sary: Flávio Forner/Infoamazonia
Ity no ampahany fahatelo (amin'ireo efatra), fanadihadiana momba ny “Amazonie extrême” (lahatsoratr'i Camila Fróis sary an'i Flávio Forner) notontosain'ny InfoAmazônia, navoaka etoana noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty. Vakio ato ny ampahany voalohany [fr].sy faharoa [mg].
Inona avy ireo olana goavana amin'ny fahasalamàna mety mifamatotra amin'ny tranganà toetrandro henjana ? “Ireo aretin'ny taovampisefoana dia mety hifamatotra amin'ny ampahany amin'ny fahakelezan'ny hamandoana na ny haratsin'ny kalitaon'ny rivotra, ireo aretina afindran'ny moka, toy ny bemangovitra sy ny tazomoka dia mahazo vahàna noho ny fahalotoan'ny rano mandritry ny tondradrano”, hoy i Christovam Barcellos, avy ao Fiocruz manamafy. Raha ny fandehany, ny vanimpotoanan'ny tondrandrano dia tsy afaka misaraka amin'ny rano tafakatra avobe ateraky ny orana mikija, mamorona rano miandrona ahafahan'ny moka aedes aegypti manatody sy mitombo, avy eo miteraka fitomboan'ny isan'ny tranganà bemangovitra.
Anatin'ny hevitr'ity mpahay siansa ity, làlana iray hampihenàna ny fiantraikan'ny fiovàn'ny toetrandro tsy ho amin'ny fahasalaman'ny olona ny fisorohana ny fandoroana ala. “Ilaina atao indray mandeha tsy miverina ny manafoana ny afo sy ny setroka ao Amazonia. Efa ananantsika ankehitriny ny teknolojia hanarahana maso amin'ny zanabolana ireo toerana fiaingàn'ny afo, ary hanaovana mihitsy aza sarintany mampiseho ireo fisehoan'ny faritra may any anatin'ireo faritra fiarovana ny tontolo iainana. Ankehitriny, tsy ampy ny hoe manana fotsiny fahalalàna ny zavatra miseho. Tsy maintsy mandeha misafo an'ireny farira ireny ary manakana ny tsy hiverenan'ireny zavadoza ireny intsony isantaona”.
Iombonan'i Darlison Andrade, miasa ao amin'ny ICMBio, sampandraharaha iray mitantana ireo “Andiany Fiarovana” breziliana, ny ahiahin'i Christovam. Ho azy, ireny faritra ireny dia vitan'ny afo fahirano ara-bakiteny satria ity sampandraharaha ity tsy manana fahefana hanarahana maso ny manodidina ireo faritra arovana, izay iaingàn'ny fanaovana tavy hatrany.
Tsy hafa fa vokatry ny haintany henjana sy mitarazoka ny fitàran'ny afo, ary manakorontana ny fitaterana, ny jono ary ny asan'ireo vondrom-piarahamonina ihany koa izy ireny. Ao Jamaraquá, ampiasaina ho toy ny lafarinina (farofa) ny mangahazo, ho toy ny singa fototra amin'ny sakafon'izy ireo. Maina ao anatin'ny tany izy io. Ari, mponina ao an-toerana no mampiseho fa niezaka izy namboly fototra vitsivitsy, tamin'ny fanantenana ny fanampian'ny orana izay tsy nilatsaka akory : “Matiantoka izay namboly, tsy ho todiny izany. Raha ny tokony ho izy, amin'izao fotoana izao efa vonona ny zavatra rehetra hiatrehana izany, saingy tsy maintsy miandry ny fotoana hilatsahan'ny orana vao afaka hasaina ny tany. Aorian'izay, efa tara koa ny fotoana fijinjàna vokatra. Ary izay tsy nahavita nanao tahiry dia tsy maintsy hividy”.
Fivarotana iray ao Maripá. Sary : Flávio Forner/Infoamazonia
Antônio Nobre, injeniera amin'ny “biogéochimie” ao amin'ny INPE, manombana hoe ity toejavatra ity dia manamafy ny filàna hetsika tsy misy hatak'andro. Ho azy, na mbola an-dàlana aza ny fanadihadiana momba ny fifandraisan'ny fandripahana ala sy ny fiovàn'ny toetrandro, ilaina ny manomboka mihetsika amin'izao fotoana izao mba hisorohana ny ho fahavoazana goavana. “Amin'ny maha-mpahay siansa ny tena, mila manandrana mampivoatra ny fahalalanay izahay mba hahatakarana an'io. Tsy mila an'izao ireo vahoaka teratany, efa manana ny fomba fijeriny ny zavatra miseho izy ireo. Ity ny hafatr'ireo vazimba teratany ao Amazonia : “Mety mba ho takatry ny Fotsy ve fa rehefa esoriny ny ala dia hitsahatra ny orana, ary rehefa mitsahatra ny orana, tsy misy ny hosotroina sy hohanina ?” Efa fantatr'izy ireo izany. “Isika koa tsy maintsy mihetsika, hijery fa hoe nitsahatra ny orana, haka hevitra amin'ny vokatra naterany ary hamerina ny ala ho amin'ny toerany”.
Tsy afaka ny ho tonga saina mihitsy ireo vahinin'i Pedrinho, tao Jamaraquá, fa hoe ireo trondro aroso azy ireo miaraka amin'ny mangahazo eny ambany aloky ny hazo manamorona ny renirano anie ka mety efa voaisa ny andro iainany : anaty toedraharaha manahirana be izao ilay renirano raha jono no resahana, ary efa manomboka mandositra azy ireo ” cabocles”. Aleon'izy ireny mandeha mividy hena any an-tanàndehibe, mandany ny andro maraina manontolo eny ambony làkana mba hitady hanina.
“Mbola ratsy lavitra ny any amin'ireo farihy anaty tanàna. Any amin'ireo izay mihandrona eo ny rano, lasa mafàna tsy tantin'ny trondro”, hoy i Ildo Santos, 24 taona, mitantara amintsika. Amin'ny fanarahanay ny soritry ny làlankely iray manavatsava ny ala, hazavain'ity mponina ity aminay fa, raha ny marina, ny ankamaroan'ireo farihy ao amin'ny faritra no efa maina nandritry ny ‘ririnina’. Ny olana, maro tamin'ity taona ity no nanjavona talohan'ny fotoana nahazatra, niteraka fahafatesana ho an'ireo trondro marobe izay tokony ho azon'ny mponina nampiasaina. “Isantaona alohan'ny haintany rehefa volana Oktobra, tonga eto ny olona ary maka trondro mba hatao vatsy, fa tamin'ity taona ity, tena haingana loatra ary rehefa tonga ry zareo tamin'ny Septambra, efa maty daholo ny trondro”.
Ho an'i Patrícia Pinho, ity fiovàm-penitry ny zava-mitranga amin'ny toetrandro ity dia miteraka tsy fahampian'ny fahitàna mialoha, mametraka eny anivon'ny mponina ny fisalasalàna momba ny fiasan'ny rafitra tontolo iainana mifehy an'i Amazonia. Noho io fiovàna henjana manjo ny rotsakorana io, tsy hain'ireo mponina manamorona ny renirano intsony izay fotoana tokony hanaovana fambolena, izay vanimpotoana tsara ho an'ny jono, na ny hatsaran'ny kalitaon'ny lafarinina hotehirizina hiatrehana ny tsy ampoizina.
Izingizinin'ity manampahaizana ity fa ireo tranganà toedrandro henjana ireo dia vao mainka nihamafy noho ny ataon'ny olombelona, indrindra fa ny fampiharany ny fomba fanjonoan'ny mpiremby. Ary, na dia ao anatin'ny faritra iray arovana ara-tontolo iainana aza ny alam-pirenena ao Tapajós, tsy mahazo fiarovana kosa na kely akory aza i Rio Tapajós, izay nanome ny anarany ho an'ilay ala.